I-Ceritinib (LDK378) ipowder-Umvelisi weFektri yoMvelisi
/ iimveliso / Umhlaza anti I-Ceritinib (LDK378)
I-Ceritinib Powder isetyenziselwa ukunyanga abaguli abanesifo somhlaza wesifo semiphunga esincinci esincinci (i-NSCLC) abanesifo se-anaplastic lymphoma kinase (ALK) kwaye abanezilonda eziqhubela phambili okanye abangakwaziyo ukunyamezela iCrotinib (crizotinib).
Igama lemveliso I-Ceritinib (LDK378) ipowder
Inani leCAS 1032900-25-6
I-Molecular Formula Ikhowudi yemali
Ubukhulu beFormula 558.135
Iintetho ezifanayo LDK-378;
Kubonakala Umhlophe ukuya kutsho-omhlophe
ICeritinib (LDK378) Powderinkcazelo
I-Ceritinib powder isetyenziselwa unyango lwezigulana ezine-anaplastic lymphoma tumor-positive (ALK +) metastatic non-small cell cancer cancer (NSCLC) eye yanzima okanye ayinyamezelani ne-crizotinib emva konyango nge-crizotinib.
Ukulungelelaniswa kwakhona kwe-chromosomal kubandakanya i-anaplastic lymphoma kinase (ALK) njengomqhubi we-oncogenic kulutshintshe ngokupheleleyo unyango lomhlaza ongalunganga wesifo somhlaza. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, iziyobisi ekujoliswe kuzo ziye zavela njengesicwangciso esisebenzayo esenzelwe ubuqu somhlaza womhlaza wemiphunga ongasasebenziyo. Ukuvunywa okukhawulezileyo kwee-ALK inhibitors ezinamandla, ezinje nge-crizotinib kunye ne-ceritinib (LDK378) yomgubo osele wenziwe kakuhle, ngokusekwe kwisilingo se-I / II esilungiswe kakuhle ibe yimpumelelo ebonakalayo kuphando lomhlaza weklinikhi kwaye inegalelo kwixesha elitsha lonyango olujolise kwi-oncogenic olubonakaliswe Uyilo oluhle lweklinikhi. I-ceritinib powder ukuba ibe yinto enamandla kwi-crizotinib ye-ALK-ehlelwe kwakhona yomhlaza wesifo somhlaza wamaphaphu.
I-Ceritinib (LDK378) ipowder Indlela yokuSebenza
I-Ceritinib powder isetyenziselwa ukunyanga abaguli abanesifo somhlaza wesifo se-metastatic non-small cell lung (NSCLC) abanesifo se-anaplastic lymphoma kinase (ALK) kwaye abanezilonda eziqhubela phambili okanye abangakwaziyo ukumelana neCrotinib (crizotinib).
I-Ceritinib powder yinto ekhethiweyo kunye ne-inhibitor enamandla ye-anaplastic lymphoma kinase (ALK). Kwi-physiology eqhelekileyo, imisebenzi ye-ALK njengenyathelo eliphambili kuphuhliso kunye nokusebenza kwethishu yenkqubo yemithambo-luvo. Nangona kunjalo, ukuhanjiswa kwe-chromosomal kunye nefusion kubangela ukuba ifom ye-ALK enoxgenic inyanzelisiwe kwinkqubela phambili ye-NSCLC. I-Ceritinib powder ke isebenza ukuthintela le enzyme iguqukileyo kwaye iyeke ukwanda kweseli, ekugqibeleni kumise ukuqhubela phambili komhlaza. Ngenxa yokuba i-ceritinib powder ithathwa njengonyango lomhlaza ekujoliswe kulo, uvavanyo oluvunyiweyo lwe-FDA luyafuneka ukumisela ukuba zeziphi izigulana ezingabagqatswa be-ceritinib powder. Olu vavanyo, oluveliswe nguRoche, yiVENTANA ALK (D5F3) CDx Assay kwaye isetyenziselwa ukuchonga abaguli be-ALK-positive NSCLC abaza kuxhamla kunyango lwe-ceritinib powder.
ICeritinib (LDK378) Powder isicelo
I-Ceritinib powder yi-anaplastic lymphoma kinase (ALK) -i-inhibitor efanelekileyo esetyenziselwa unyango lwe-NSCLC ye-metastatic. Ukusebenza njengokhetho oluphambili kwi-NSCLC yemastastatic.
ICeritinib (LDK378) Powder Iziphumo ebezingalindelekanga kunye nesilumkiso
Iziphumo ezibi ezimbi zibandakanya ityhefu yamathumbu, i-hepatotoxicity, isifo semiphunga esiphakathi, isifo se-QT sexesha elide, i-hyperglycemia, i-bradycardia kunye ne-pancreatitis.
Iziphumo ebezona zixeliweyo zixhaphakileyo sisifo sorhudo, isicaphucaphu, ii-enzyme zesibindi eziphakamileyo, ukugabha, iintlungu zesisu, ukudinwa, ukuncipha kokutya, kunye nokuqunjelwa. Ngenxa yomngcipheko wee-enzyme zesibindi eziphakanyisiweyo, iimvavanyo zomsebenzi wesibindi kufuneka zenziwe rhoqo kwiiveki ezimbini kwiiveki zokuqala ezili-9 zonyango.
Okokugqibela, i-ceritinib powder yomibini i-substrate kunye ne-inhibitor enamandla ye-enzyme CYP3A4, ke amayeza kufuneka abekwe esweni ngononophelo anokusebenzisana ne-ceritinib powder.
▪ urhudo oluqatha;
▪ intloko ebuhlungu, ukudideka, ukutshintsha kwemo yengqondo, ukungaboni kakuhle, ukuxhuzula (ukuxhuzula);
▪ ukuchama kancinci okanye ukungabikho kwaphela;
Ukopha ngokungaqhelekanga (ukuphuma kwegazi, ukopha okunzima ukuya exesheni), okanye nakuphi na ukopha okungayi kuyeka;
Imiqondiso yokopha esiswini-igazi okanye isitulo sokulinda, ukukhohlela igazi okanye ukugabha okungathi yindawo yekofu;
▪ iingxaki zentliziyo-iintlungu esifubeni, iintlungu emhlathini okanye egxalabeni, ukudumba, ukukhawuleza ukutyeba, ukuziva uphefumla kancinci;
▪ Iimpawu zegazi elibalekileyo-ngesiquphe okanye ukuba buthathaka, iingxaki ngombono okanye intetho;
▪ iingxaki zesibindi-umchamo omnyama, ilindle elinombala wodongwe, ijundisi (ukuba mthubi kwesikhumba okanye amehlo);
▪ iqondo eliphantsi lekhalsiyam- ukuphazamiseka kwemisipha okanye ukucaphuka, ukuba ndindisholo okanye ukuziva ubambe (emlonyeni, okanye eminweni nasezinzwaneni);
▪ ukunyusa uxinzelelo lwegazi-intloko ebuhlungu, ukungaboni kakuhle, ukubetha entanyeni okanye ezindlebeni, unxunguphalo, ukopha ngeempumlo.
Unyango lwakho lomhlaza lunokulibaziseka okanye luyeke ngokupheleleyo ukuba uneziphumo ebezingalindelekanga.
 “IZykadia (ceritinib powder) njengeeCapsule, zokuSebenzisa ngomlomo. Ulwazi oluGcweleyo lokuMisela ”(PDF). INovartis yoShishino lwaMayeza. Ukufunyanwa kwe-14 kaFebruwari 2017.
 “Amagama aMazwe ngaMazwe aNgenanto yakwenza nokuSebenzisa iziyobisi (INN). Kunconywe aMagama angaPhandle kokushishina: Uluhlu lwama-71 ”(PDF). I-World Health Organization. 2014. iphe. 79. Kubuyiswa umhla we-14 kuFebruwari 2017
 "I-FDA ivuma i-Ceritinib powder ye-ALK-Positive Lung Cancer". Ukuthintela. Epreli 29, 2014.
 "Ukuyalela idatha" (PDF). www.pharma.us.novartis.com. Ifunyenwe ngo-2019-06-12.
 "I-FDA yandisa iCeritinib powder Ukuvunywa komhlaza wemiphunga". IZiko leSizwe loMhlaza. 27 kweyeSilimela 2017.